Galmee Jaalala Dhugaa” Song. Baacoo Afaan Oromoo Bookstore. Shamarreen tokko akka waan hin barbaadamne tokkootti of ilaaluu yeroo jalqabde akka.
Monday, December 31, Sections of this page. Icciitii kee immoo anarraa kan darbe nama tokkofiyyuu ‘share’ hin godhiin.
Iji koo erga si argee kunoo bubbuleera! Home Fayyaa fi Jaalala Jaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata. Kaleessa dogoggoraan jaalala dhabdeef Waaqayyo waan hundaan ishee hin miine; dhalaan ishee kiiseeraan.
Yeroon gaaffii jaalalaa kana siif dhiheesses bara waktii gannaa sana baayyee sodaatte! Guca maalummaa kootii See More. Atleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Kanaadatti geggeeffame irratti Woyyaanee balaaleffate. Andualem Befikadu Demelce Personal Blog. All Aadaa Bashannana Viidiyoo.
Garuu umuriin ishee waan deemeef qofa, nama akka isaatti ishee jaallatu waan hin arganneef qofa, dhiira jaalallee ishee jalqabaa sammuu ishee keessaa balleessu waan yoomuu harkisuu hin dandeenyef qofa, waan heerumtee dhala godhachuu qabduuf qofa, waggaa lama booda dhiira biraatti chugaa haadha manaa taate.
Awash Post Oromo News. Akkam jirtuu hordoftoota fb galmee jaalala dhugaa. Ammas hedduun namootaa jaqlala jaalala isaanii gidaara manaan wolitti buusu, galaana dhufaa jiru fudhachiisu irraa fagotti uftiksu.
Jaalalli dhugaa woliigaluu, kennanii fudhachuufi wolhubachuu gaafata. Namni kamuu kabaja jaalalaaf qabuun jireenyi isaa miidhaga yookaan fokkata. Anarraa kan darbe akka namni kaan dhoksaa kee hin agarre ‘privacy’ kee seenii ‘only him’ kan jedhurra kaa’i. Jaalale koo duraan dagachu dadhabe 2. Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa dhuvaa biliyoona….
Garuu, utuu garaa hin jabaatin jecha gaaffii koof furmaata kennuun deebii naaf deebifte!
Kana booda nama ‘follow’ si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. Dhugwa hin qoosamu kutaa 4ffaa. Afaan Oromoo website Personal Blog. Achumaan Saaqqattee Onnee koo seente! Ani sirraa addaan bahuun koo hedduu na rakkise. All Fayyaa fi Hawaasa Jaalala. Koo an kanin jedhu ani nama jaalladhee beeka, warran duukaa jaalala dhamdhamaa tureyyuu baay’eesaanii kaniti beektu ofiinan dhiisee gale.
Bakka jaalale qabadhu wajjumaan taphadhe dhiisu barbaada 5. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Dhaabbileen dhuunfaa PLC naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye.
Umriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? All Barnoota Saayinsii Teknolojii.
Ija kootu guyyaa hamtuu tokko sirra bu’e! Osoo hin heerumin mucaa dhiiraa garatti ishee hafe deesse haadha mucaa taate. Miidhaafi hubaatii irraas kan nama tiksu dhugax jaalala dhugaati. Baay’ee dubbadheef suusii nan baasu.
Fedhi akkas gonkuma hin qabu 9. Sin jaalladha jedhus jaalala isaa duugaa ittiin argitu hin qabdu; kabaja dhiirri Jaalallee isaaf qabuu osoo itti hin agarsiisin itti heerumte; akka haadha manaatti osoo hin taane akka warteessuutti ammoo waliin jiraata jirti. Hanga amma maalif kophummaan jiraate jaalale malee? Waa’ee sabboonummaa kee irratti ‘comment’n siif kennu hin qabu. Safuu Jaalalaa Entertainment Website. Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanniiniin wolbira qabaa madaallii mataa keessanii itti laataa.
Maal hojjetta hiriyaa koo nageenyi badhaadhaa?
Kan ishee kanaas akkasuma. Dirqama fudhachu hin fedhu Waanuma fedheefuu hiriyyoota kee warra kottu magaalaa keessa deemna jedhanii’invite’ si godhan immoo hin dhaggeeffatiin. Jiru na qabe fkn Hojji barbaada,Dalaga dalagaa jira,Barachaan jira Kana ta’uu baannaan garuu sammuusaa ‘deactivate’ godheen dhagaafi dinnicha illee akka adda baafachuu hin dandeenyetti ‘offline’ isa taasisa.